बाल यौन शोषण: यी ६ तरिका अपनाई आफ्ना बच्चालाई यौन शोषणबाट राख्न सकिन्छ, सुरक्षित – Etajakhabar
बुधबार, जेठ ०९, २०७५ | Wednesday, May 23, 2018
बाल यौन शोषण: यी ६ तरिका अपनाई आफ्ना बच्चालाई यौन शोषणबाट राख्न सकिन्छ, सुरक्षित
ताजा खबर:- स्कूलबाट होस् या बाहिरबाट खेलेर जब तपाईको बच्चा घर आइपुग्दा निराश एवम् मलिन रहन्छन् या रुँदै घरमा प्रवेश गर्छन र घरदेखि बाहिर निस्कन डराउने गर्छन् भने तपाई सतर्क रहन अति आवश्यक हुन्छ । यी लक्षणले कतै न कतै तपाईलाई बच्चाको यौन शोषणतर्फ संकेत गर्छ । यौन शोषणको विभिन्न घटना आजकल देखिन थालेका छन् । यसमा शोषण गर्नेहरू बढीजसो कोही नजिकका नातेदार, स्कूल बसको चालक या वरपरको छिमेकको कुनै व्यक्ति हुनसक्छन् । बच्चाहरूलाई यसको बारेमा अधिक जानकारी हुँदैन यसकारण उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि उनीहरूको साथमा के भैरहेको छ या यो कुरा कसैलाई बताउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा केवल तपाईले मात्रा आफ्ना बच्चालाई यौन शोषणको घटनाबाट बचाउन सक्नुहुन्छ । उनीहरूलाई यस विषयमा आवश्यक जानकारी दिई यहाँ उल्लेखित केही उपायको मद्दतले आफ्नो बच्चालाई यस्ता अप्रिय घटना हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।
१-बच्चालाई उनीहरूको शरीरको अंगको बारेमा बताउनुहोस्,
यौन शोषणबाट बच्चालाई बचाउनका लागि उनीहरूलाई यस बारेमा बताउन आवश्यक हुन्छ । तपाई आफ्नो बच्चालाई उनीहरूको शरीरको हरेक अंगको बारेमा बताउनुहोस् । उनीहरूलाई यो कुरा पनि बताउनुहोस् कि उनीहरूको शरीरको कुन भाग बढी प्राइभेट हो, जसलाई कसैले पनि छुन सक्दैन ।
२-बच्चाको टाइमटेबल जान्ने कोशिश गर्नुहोस्,
स्कूलबाट घर फर्किसकेपछि बच्चासँग कुरा गर्ने कोशिश गर्नुहोस् । उसलाई सोध्नुहोस् कि दिनभरमा के-के गर्यो, कुन-कुन व्यक्तिसँग भेटघाट भयो । उनीहरूलाई बोल्नका लागि प्रोत्साहित गरेमा तपाईलाई उनीहरूले सबै कुरा भन्ने हिम्मत पाउँछन् ।
३-बच्चासँग राम्रो कम्यूनिकेशन बनाउनुहोस्-
यौन शोषण जस्ता घटना बच्चाहरूले कसैलाई पनि बताउन कठिन मान्दछन् । चाहे तपाई उनीहरूको आमा-बुवा भएता पनि यस्तो व्यवहार देखाउन सक्छन । यस्तो अवस्थामा आवश्यक हुन्छ कि तपाई आफ्नो बच्चासँग एक राम्रो कम्यूनिकेशन बनाई राख्नुहोस् । कोशिश गर्नुहोस् कि तपाई सँग कुरा गर्दा बच्चा निडर होस् । उनीहरूलाई विश्वास हुनुपर्दछ कि तपाई उनीहरूलाई मद्दत गर्नुहुनेछ र सुरक्षा दिनुहुनेछ ।
४-सही-गलतको पहिचान गराउनुहोस्
बच्चालाई खराब स्पर्शको बारेमा बताउनुहोस् । उनीहरूलाई यो पनि सम्झाउनुहोस् कि उनीहरूसँग हुने कुन कार्य सही हो र कुन गलत हो । उनीहरूलाई निर्देश गर्नुहोस् कि उनीहरूसँग कुनै पनि गलत कार्य भएमा तुरुन्त तपाईलाई सूचित गरोस् ।
अधिकांश यौन दुर्व्यवहार गर्नेहरू बच्चालाई यौन शोषणको बारेमा कसैलाई नभन्न धम्की दिने गर्दछन् । यसलाई दुई व्यक्ति बीचको सीक्रेट फ्याक्टर भनिन्छ । तपाई बच्चालाई सम्झाउनुहोस् कि आमा-बुवासँग कुनै पनि कुरा लुकाउनु हुँदैन ।
आफ्नो बच्चालाई बताउनुहोस् कि को विश्वासिला छन् र को छैनन् । यसको साथै बच्चाको केयर टेकर, टिचर र हरेक त्यो शंकास्पद व्यक्ति जो तपाईको बच्चासँग जोडिएका हुन्छन्, उनीहरूको छनौट गर्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुहोस् । विश्वासिला मानिसलाई नै यस्ता जिम्मेवारी सम्हाल्न दिनुहोस् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २९, २०७४ समय: २१:३९:१३
ग्राण्डी हस्पिटलमा उपचार गराई रहेका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको बारेमा हस्पिटलबाट आयो यस्तो खबर !
छिटो विर्य स्खलन भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? यि चर्चित चिकित्सकले नै दिए यौन सम्पर्कको अवधी लम्ब्याउने तरिका
यी हुन् ज्वरो निरीक्षण गर्न १८ लाख सक्ने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल
काठमाडौँ उपत्यकामा भन्दा लुम्बिनी बढी प्रदूषित
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको अवस्था गम्भीर, आन्तरिक रक्तस्राव नरोकीएपछी भारतबाट चिकित्सक मगाउन लागियो !
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे अस्वस्थ भएपछि ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना, सिसियूमा राखेर उपचार थालियो
खाडीको चर्को तापमा काम गर्ने नेपालीकाे शुक्रकिटमा ह्रास
स्वास्थ्य संस्थामा चरम लापरवाही बढ्दो, इमर्जेन्सीमासमेत डाक्टर बस्दैनन्
स्वास्थ्य रहन हप्तामा कति पटक शारिरिक सम्पर्क गर्न पर्छ ? महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्ने ?
छोरीलाई महिनौँदेखि बलात्कार गर्दै आएका बाबुको हर्कत आमाले देखिन्, प्रहरीकहाँ ति बलात्कारी बाबुले दिए प्रहरीलाई चकित पार्ने उत्तर
मध्यरातमा सुटुक्क काठमाडौ छिरेका 'गोरे' लाई रातभर प्रहरीले खोज्दा बिहान ५:३४ बजे काठमाडौंको गौरीघाटबाट यस्तो अवस्थामा पक्राउ परेका थिए !
भारतीय सेनामा जागिर खान ट्रेनिङ गरेका गोरे भागेर दूबई प्रहरीमा जागिर खान्थे, उनीबारे थप खुल्यो यस्तो रहस्य
शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान १८ बर्षमै यस्तो हट देखिन्छिन ! हेर्नुहोस कुनै बलिउड हिरोइन भन्दा कम छैनन् !
घरमा एक्लै रहेको बेला ब्लु फिल्म हेरिरहेका युवकले उत्तेजित भएर आफ्नो गुप्तांग नै काटे
पत्रकार सम्मेलनमै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुदै प्रहरीले मुखमा लगाएको कालोपट्टी र टोपी ह्या भन्दै खोलेर भूँइमा फाले गोरेले (भिडियोसहित)
आईपीएलमा सन्दिपले मुम्बर्इविरुद्ध सनसनी मच्चाउदै ब्यक्तिगत ३ ओभरको बलिङ सकिंदा ३ विकेट लिदै राखे अर्को रेकर्ड !
तिब्र गतिको यात्रुबाहक बस पल्टियो: एकको मृत्यु, १६ यात्रु घाइते
पूर्वराजा–शंकराचार्य कनेक्सन, राजा तल शंकराचार्यमाथि
बेवारिसे अवास्थमा शव फेला, हेर्न नै नसकिने अवस्थामा भेटियो
देश फर्के लगत्तै सन्दीप लामिछानेलाई दिइयो कार उपहार
आइपीएल खेलेर फर्केका सन्दिपले “तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको” भन्ने गित स्टेजमा गएपछि दर्शकको तालि र हुटिङ्गले गुन्जियो हाल (भिडियोसहित)
लागुऔषधको कुलतबाट मुक्त हुन पूर्वी नेपालकी एक महिलाले गरेको संघर्षको कथा: “म होसमा आँउदा शरीरमा लुगा थिएन, त्यसपछि म धेरै रोएँ”
विकास र समृद्धिका लागि सिण्डिकेट अन्त्य हुनुपर्छः गृहमन्त्री थापा
ईतिहासकै सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् – राजनितिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी (भिडियो)